July Dream: Oral Cancer
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူနေမှုပုံစံတွေ ပြောင်းလဲနေတာနဲ့အမျှ ခံတွင်းကင်ဆာဆိုတဲ့ ကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးဟာလည်း လူငယ်ထုအတွင်းမှာ ပျံ့နှံ့ထိုးဖောက် နေရာယူနေတာကို တွေ့ရှိလာကြရပါတယ်။ အခုနှစ်ပိုင်းမှာ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့သူတွေက အသက် ၂၄၊ ၂၅ နှစ်အရွယ်တွေ ဖြစ်နေကြတာကို တွေ့ရှိလာရတယ်လို့ မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ကု ပညာဌာနက ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှုး ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ဦးကိုကိုမောင်က ပြောကြားထားတာကို ဖတ်ရှုလိုက်ရပါတယ်။
ခံတွင်းကင်ဆာဆိုတာ ခံတွင်းထဲမှာ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်တွေ ကြီးထွားရှင်သန်နေတာကနေ စပါတယ်။ အဲဒီကနေ တံတွေးဂလင်းတွေ၊ တခြား ခံတွင်းထဲ လျှာတွေ အာခေါင်တွေစတဲ့ အင်္ဂါတွေကို ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိစေကုန်ပါတယ်။ ခံတွင်း ကင်ဆာဖြစ်ရင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု မရှိတာကြောင့် ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေဖြစ်ကြပါတယ်။ ကင်ဆာရဲ့ အကြိုလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ အဖြူကွက်၊ အနီကွက်တွေ ဖြစ်လာရင်လည်း သတိမထားမိကြပါဘူး။ ခံတွင်းမှာ အနီကွက်တွေ ဖြစ်လာရင် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ဖို့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ အဖြူကွက် ဖြစ်လာရင်တော့ ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ ရောဂါအကြို လက္ခဏာတွေက လျှာမှာဖြစ်တဲ့အနာတွေ၊ လည်ချောင်းမှာ ဖြစ်တဲ့အနာတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်မှု ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကွမ်းစား ဆေးသောက်တာက လူနည်းစုပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကွမ်းစားတဲ့လူတွေ အရမ်းကို တွေ့ရလာပါတယ်။ အထက်တန်း ကျောင်းသားတွေ၊ ပညာတတ်တွေပါ ကွမ်းစားလာကြတယ်။ လူငယ်တွေလည်း အတော်လေး ကွမ်းစားလာကြပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသား တစ်ယောက် အသက် ၁၄ နှစ် ၁၅ နှစ်မှာ စပြီး ကွမ်းစားရင် အသက် ၂၅ မှာ သူ့ရဲ့ ကွမ်းစားသက်က ၁၀ နှစ်ထဲ ရောက်နေပါပြီ။ နောက် အရွယ်က ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ အရွယ်ဆိုတော့ ဆဲလ်တွေရဲ့ ကြီးထွားနှုန်းကလည်း အရမ်းမြန်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ကွမ်းစားနှစ်ရှည်ဖြစ်တာရယ် အသက်အရွယ် ငယ်တာတွေရယ်ကြောင့် ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများလာတဲ့ သဘောမှာ ရှိလာပါတယ်။ အသက်ကြီးပိုင်း အသက် ၄၀ နှစ် ပိုင်းတွေကျတော့ ဆဲလ်တွေ ကြီးထွားနှုန်း နှေးသွားတဲ့အတွက် လူငယ်တွေလောက် ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ပွါးများမှု မများပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် လူငယ်တွေမှာ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်တာ ပိုများလာတာပါ။
ကွမ်းထဲမှာပါတဲ့ ကွမ်းသီး၊ ထုံး၊ ရှားစေး၊ ဆေးရွက်ကြီးတွေကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းစားရင် အကြာကြီး ငုံထားတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကြောင့် ပါးစောင်၊ လျှာရင်း အောက်ပိုင်းနဲ့ သွားဖုံး စတဲ့နေရာတွေမှာ ကင်ဆာ အဖြစ်များပါတယ်။ အရက်၊ ဆေးလိပ် သောက်ပြီး ကွမ်းစားသူတွေမှာ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။ ကားမောင်းတဲ့အခါ အိပ်မငိုက်အောင် ကွမ်းတစ်ယာပြီးတစ်ယာ ဆက်တိုက် စားတတ်တဲ့ ကားသမားတွေနဲ့ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေမှာ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ များတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
အရက် ဆေးလိပ်ဆိုရင် ရိုသေသမှုနဲ့ လူကြီးမိဘတွေရှေ့မှာ သောက်တဲ့ အလေ့အထ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွမ်းကြတော့ ဆေးလိပ်တို့ အရက်တို့နဲ့ ပုံစံမတူသလို သဘောထားကျပါတယ်။ လူကြီးမိဘရှေ့မှာ စားလည်း အဂါရ၀တရား မဖြစ်ဘူးလို့ မြင်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ကွမ်းဆိုတာကလည်း နေရာတိုင်းမှာ အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရနေပါတယ်။ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်တွေ၊ မီးပွိုင့်တွေမှာ ကားခဏလေး ရပ်တာနဲ့တင် အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရတဲ့ အနေအထားတွေကြောင့် လူငယ်တွေ ကွမ်းပိုစားဖြစ်ကြပါတယ်။
ခံတွင်းကင်ဆာဟာ ကမ္ဘာမှာ အဖြစ်များဆုံး ကင်ဆာ ၁၀ မျိုးထဲမှာ နံပါတ် ၆ အဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်မှ နံပါတ် ၅ အဆင့်နေရာမှာ ရှိပြီး သည်နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီး အဖြစ်များလာတဲ့အတွက် အဆင့် ၄ ကို ရောက်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပြီဆိုရင် ရောဂါအဆင့် ၁ နဲ့ ၂ လောက်မှာ သိရင် ခွဲစိတ်ပြီး ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုထုံးနဲ့ ကုရင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုက လူငယ်ပိုင်းတွေ ဖြစ်နေတော့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်မှာစိုးပြီး မခွဲစိတ်ချင်ကြဘူး။ ဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ ကုတာကြောင့် အခြေအနေ ပိုဆိုးသွားကြတာ များပါတယ်။
ရောဂါဖြစ်သူအများစုက မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်လာတော့မှပဲ ဆေးရုံဆေးခန်းကို လာရောက်ပြသကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရောဂါအဆင့် ၃၊ ၄ လောက် ရောက်နေကြတော့ ဓါတ်ကင်ပေမယ့်လည်း မပျောက်ကြတော့ပါဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာက မနာကျင်တော့ ဖြစ်တာ မကြာသေးဘူးလို့ပဲ ထင်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ နောက် ဓါတ်ကင်တာကိုလည်း ရောဂါ မပျောက်ဘူးလို့ အများစုက ထင်ကြသေးပါတယ်။ အမှန်တော့ ရောဂါလွန်နေမှန်း မသိကြဘူး ဖြစ်နေကြတာပါ။
ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကွမ်းစားတဲ့သူ အများစုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ခံတွင်းကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ခံတွင်းထဲမှာ အစူးအရှ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ သွားချွန်တွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ သာမန်လူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ခြောက်လတစ်ကြိမ် ကိုယ့်ရဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို မှန်မှန် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အရက်ဆေးလိပ်နဲ့ ကွမ်းစားတာတွေကို ရှောင်နိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာလူငယ်ထုအတွင်းမှာ ခံတွင်းကင်ဆာ ရောဂါအကြောင်း သိရှိနားလည်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ချွေလိုက်ပါတယ်။
Credit: Thandar Htwe (Kumudra Journal- No. 278)
Posted by JulyDream at 11:08 AM
ရှေးကတည်းက မြန်မာတွေကွမ်းစားလာကြတာပါ ဘာမှမဖြစ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ထုံးဖောက်တဲ့
စနစ်ကြောင့် ပါးစောင်ကင်ဆာဖြစ်ကြတာလို့ပြော ကြပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် မစားပဲနေနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်
အရေမရ အဖတ်မရ (ရောဂါသာရ)၊ ညစ်ပတ်တဲ့ ကွမ်းစားတဲ့ ဓလေ့ကို ဖျောက်သင့်ပါတယ်။ စင်္ကာပူက ပင်နီစူလာက အမှိုက်ပုံးတွေ အိမ်သာတွေမှာဆိုရင် ကွမ်းတတွေးတွေနဲ့ ညစ်ပတ်နေတတ်တာ ရွံဖို့လည်းကောင်း ရှက်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ ခုလို ဗဟုသုတ ရအောင်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ကြိုက်တဲ့လူတွေက ကြိုက်ကို ကြိုက်နေကြပါတယ်။ အကျင့်ကို ဖျောက်လို့ ရပေမယ့် ရှေးရိုး ဓလေ့ ဆိုပြီး အမြတ်တနိုး လုပ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ သူတို့အဆို မြန်မာဆန် တယ်ပေါ့ဗျာ။ ရောဂါ ရတာကိုတော့ သိပ်အလေး မထားတာ ရင်လေး စရာပါ။
ဟုတ်တယ်...။ အဲဒီကွမ်းကို တော်တော်စွဲနေကြပြီ..။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ချာတိတ်တွေက အစပေါ့...။ ဘယ်လို ပညာပေးကြမလဲ...။ ကျယ်၂ပြန့် ၂ ပညာပေးသင့်ပြီ...။
Dear Yesterday - 1
Ludu Daw Amar's Birthday
YTU Poem - 4
YTU Poem - 3
YTU Poem - 2
YTU Poem - 1
The genuine refuge
Who changed my world!
My hateful animals
Before you say "I DO" 14
Before you say "I DO" 13
Before you say "I DO" 12
Before you say "I DO" 11
Before you say "I DO" 10